“Ma awoodo inaan joojiyo qosolka marka aan daawado Lionel Messi oo ciyaaraya kubada cagta” – Gool FM
(Barcelona) 31 Okt 2018. Halyayga reer Spain iyo kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa amaanay qaab ciyaareedka kala duwan saaxiibkiis hore ee Lionel Messi, waxaana wareysiga Xavi ay si weyn u xiiso galisay saxaafada.
Xavi Hernandez ayaa ka hadlay waxyaabo badan ee xiiso u leh Barcelona, iyo sidoo kale saaxiibkiisii hore ee 5 jeer kusoo guuleestay abaal marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi, kadib wareysi uu ku bixiyay Ràdio Catalunya.
“Runtii ma awoodo nafsadeyda inaan joojiyo qosolka, marka aan arko Lionel Messi oo ciyaaraya kubada cagta, wax walba ayuu u sameyn karaa sida saxda ah, waa wax cajiib ah”
“Aniga ahaan, Lionel Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka iyo sidoo kale taariikhda kubada cagta, Messi wuxuu ku ciyaari karaa isla qaab ciyaareedkan cajiibka ah ilaa iyo da’aada 38-aad ilaa iyo 39-aad”.
Waxaa xusid mudan in Lionel Messi iyo Xavi Hernandez ay sanada cajiib ah si wada jir ah ugu soo wada qaateen garoonka Cump Nou, kahor inta uusan halyayga reer Spain ka dhaqaaqin kooxda Barcelona.
EEG: Safka uu Caawa ku soo gali karo Tababaraha Cusub ee Real Madrid kulankiisii ugu horreeyay